I-china eyenziwe ngokwezifiso imilo yebhokisi yesipho kunye nomgangatho ophezulu webhokisi yomvelisi kunye noMthengisi | Huaguang
Iibhokisi zesipho esenziwe ngentando ezenziwe ngebhokisi ekumgangatho ophezulu
ngeenxa zonke ibhokisi yesipho
Ubukhulu: 30 * 30 * 20cm
Iinkcukacha Packaging: iiPC ezintathu polybag okanye imfuneko sakho
Uyilo lokupakisha kukuphononongwa okusebenzayo kwehlabathi ngengqondo ebonakalayo njengeziko kunye nezinye izivamvo ezine njengomncedisi. Ebomini, nganye yorhwebo ivuselela ngamandla izivamvo zabantu ngeendlela ezahlukeneyo, ibangela umnqweno wokuthenga. Kunokuthiwa umtsalane wokupakisha luluntu lwangoku olusebenzisa "izivamvo ezintlanu" kunendlela yentengiso enomtsalane. Namhlanje, makhe sithethe ngoyilo lokupakisha ngale bhokisi yeesipho:
Umbono liziko lobugcisa kunye noyilo, iziko loyilo lobugcisa olubonakalayo lunokubonakala kuyo yonke indawo, umbala woyilo lokupakisha, imizobo, isicatshulwa, imilo, njl., Zisekwe kwimbonakalo njengeziko loyilo, izinto ezibonakalayo kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kunye nokudityaniswa, ukwenzela ukutsala abathengi, ukwenza umdla wabathengi, ukukhuthaza abathengi ukuba bathenge. Phakathi kwezinto zokupakisha ezibonakalayo, umbala, njengeyona nto ibaluleke kakhulu ebonakalayo, uye waba yifom yolwimi ebalulekileyo kubaqulunqi.
Uyilo lwebhokisi yesipho, ihlala ingadingi mbhalo mningi, njengale bhokisi yezipho ijikelezayo, hayi igama. Ezinye iibhokisi zezipho ziya kuprintwa ngamagama alula, anjengokubulisa okanye ukubonakalisa uthando.
Umbala unokwenza abantu bavelise ikhonkrithi kunye nomanyano ongabonakaliyo, njengombala ofudumeleyo owenza ukuba abantu bacinge ngelanga, umlilo, okanye izinto ezinobundlongondlongo, kwaye umbala opholileyo unokwenza abantu badibane namanzi, umoya, bacinge ngobuntu obunengqondo kunye nokuzola.
Le bhokisi yesipho ibomvu ebomvu, umbala ofudumeleyo onjalo unokutsala amehlo abathengi, kwimbonakalo ukutsala umdla wabathengi.
Okwesibini, ubudlelwane phakathi kwezinto ezibonakalayo kunye nezoqoqosho kunye nenkcubeko yabathengi zibhekisa ekubeni abathengi abahlukeneyo banamakhono ohlukeneyo oqoqosho kunye nenqanaba lemfundo nenkcubeko. Ukuxabisa kwabo ubuhle kunye nomgangatho wobomi wahlukile, ubonakaliswa ngokwamkelwa kombala kunye nezinye izinto ezibonakalayo, kuya kubakho umahluko omkhulu. Ke ngoko, uyilo lokupakisha kufuneka lunyameke kakhulu ekukhetheni umbala ofanelekileyo, iigrafiki kunye nezinto zokwenza.
Okokugqibela, unxibelelwano phakathi kwezinto ezibonakalayo kunye nendawo yokuhlala yabathengi kuthetha ukuba iphakheji ihlala ikwiindawo ezithile zobomi babathengi. Ke ngoko, umbala kunye nokuthambeka kwamanqaku ahlukeneyo okusetyenziswa kwemihla ngemihla okunxulunyaniswa nempahla kufuneka kuthathelwe ingqalelo kuyilo lwepakeji, ukwenzela ukuba umfanekiso wokupakisha ubonakale ungqinelana nendawo yokuhlala yabathengi.
Uyilo lwebhokisi enezipho ezininzi, kufuneka lubonakalise umxholo oza kuziswa kubathengi ngoyilo. Ezinye iibhokisi zezipho, nangona kunjalo, zilula kakhulu, ezinje ngeebhokisi ezilula neziqhelekileyo, okanye ukusetyenziswa kwemibala eqinileyo, zenza iibhokisi zezipho zibe zakudala kwaye zomelele. Njengale bhokisi yesipho ejikelezileyo, uyilo lwayo olulula alunakufihla intliziyo efudumeleyo yalowo uphayo.
Egqithileyo isiciko esikhutshiweyo esinebhokisi yokugcina ekhaya iikawusi ibhokisi yephepha
Okulandelayo: Ibhokisi yokudlala yabantwana ibhokisi yekhadibhodi enesiphatho